First ... 49 89 97 98 99 100 Last
09-05-2013 07:25 AM #981
aeYvnfpm pm;jyD; pum;pyfvkdY pDeD,meJY pum;ajym&mu yDtm avQmufzdkY twGuf tydGKifhrefY ,lzdkY Munfhrdw,f ..
2014 azazmf0g&D aemufqHk;ywfu tapmqHk;yJ .. tydGKifhrefY ,lvdkY &wm ..
uGsefawmfuawmh yxrqHk;,lvdkY &wJh paeaeY .. rwfv 1 &ufaeY reufudk ,lxm;vdkufw,f ..
usL;ypfwdkYxJu avQmufzdkY pdwful;&Sd&if MudK,lxm;Muaemf ..5v?6v avmufawmif apmifh&rSm ..
badinf, barronbala, bigxxx, Chit.tat.lun.tu, daylight, dotekha, JanJan, KaungKinPyar, KM Wai, KoSai11, mgmgthan, MNO.BN, roger, shadow69, silence, softsin, ThunderHawk, tiptop, vivid, yokesoe
09-06-2013 08:13 AM #982
ဟုတ်ပါတယ် စနေနေ့တွေက အပွိုင့်မန့်ပြည်နေတာ များပါတယ်။ ရုံးကနေခွင့်မယူချင်ဘူး စနေနေ့ပဲသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 5လ 6လ လောက်စောင့်ရမှာပေါ့။ ဂြားရက်တွေဆိုရင်တော့45 လတော့စောင့်ရတာပေါ့။
စောင့်ရတာကြာတယ်ထင်ရင် အပွိုင့်မန့်ကိုယူထားလိုက်။ ပြီးရင် အားရင်အားသလို နေ့တိုင်း အပွိုင့်မန့်.ကို ချက်။ တချို့တွေကပြန် cancel လုပ်တော့ ဂျားထဲမှာ slot တွေ ပြန်ရှိတတ်တယ်။ လွတ်တာကိုမြင်တာနဲ့ ချိန်းမလား/ မချိန်းဘူးလား မြန်မြန်ဆုံးဖြတ်။5မိနစ် 10 မိနစ်အတွင်း အဲဒီ လွတ်နေတဲ့ အပွိုင့်မန့် slot တွေ ပြန်ပါသွားတတ်တယ်။
ကျွန်တော်က ဂြားရက်အပွိုင့်မန့်ကို မေလကတည်းကယူထားတာ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ကတင်လိုက်ပြီ။
ဒီတခါကျွန်တော်ကို တက်ကသိုလ်က အမှတ်စရင်း/grading ပါတောင်းလို့ ၁ရက်ထဲမပြီးပဲ နောက်၁ရက်ထပ်သွားပေးလိုက်ရတေးတယ်။ အဲဒါတောင်းတာတော့ နဲနဲထူးခြားတာပေါ့ အရင် ၂ခါတုန်းက မတောင်းဖူးဘူး။ Documents to be produced list အထဲမှာလဲ မတွေ့့မိသလိုပဲ။
Last edited by bigxxx; 09-06-2013 at 08:26 AM.
2323, badinf, barronbala, Chit.tat.lun.tu, daylight, JanJan, KaungKinPyar, KM Wai, KoSai11, mgmgthan, MNO.BN, roger, shadow69, solidsnake, ThunderHawk, tiptop, weithet, yokesoe, ZuKa, zzz
09-07-2013 07:08 AM #983
အားလုံးသိဖို့ လိုမယ်ထင်လို့ ဒီမှာတင်လိုက်ပါတယ်။
စင်ကာပူ MOM ရုံးသစ်ပြောင်းရွှေ့၊ လုပ်ငန်းစဉ်များပါ ပြောင်းလဲ၊အရင်လို Pass ကတ်ပြားသွားထုတ်စရာမလိုတော့၊SPASS အနိမ့်ဆုံးလစာကို စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၂၀၀ သို့တိုးမြှင့်ထားပါသည်။
စင်ကာပူ Ministry of Manpower (အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ဆိုပါစို့)
Work Pass Services Centre, WPSC (အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်
ပြုလုပ်ရာစင်တာ) ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁၀ ရက်မှစ၍ ရုံးခန်းသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
ယခင်က Tanjong Pagar, PSA အနီးတွင် ရှိသောရုံးအဟောင်းမှ
ယခု MacPherson အနီးရှိ ရုံးသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သလို စင်ကာပူတွင်
MOM သည် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုလျှင်မြန်ချောမွေ့စေရန်နှင့်
အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခြင်းများ မဖြစ်စေရန်အတွက် Work Pass
Card Registration ကို appointment (ကြိုတင်ရက်ချိန်းယူ) ယူထား
ထို့ကြောင့် Work Pass Card Registration မလုပ်ခင် အွန်လိုင်းမှ
ယခင်က အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် Pass လျှောက်ထားရာတွင်
MOM ရုံးသို့ အနည်းဆုံး (၂) ကြိမ်သွားရောက်ရပြီး၊ Pass Renew
(ပတ်စ်သက်တမ်းတိုး)လျှင် (၁) ကြိမ် သွားရောက်ရသော်လည်း
ယခုပြောင်းလဲလိုက်သော လုပ်ငန်းစဉ်အရ Pass စစလျှောက်ထား
လျှင် Register လုပ်ရန် (၁) ကြိမ်သာလိုအပ်တော့ပြီး Renew/
အလုပ်ပြောင်းဆိုလျှင် သွားစရာမလိုတော့ပါ။ အွန်လိုင်းမှ သက်တမ်း
Pass အသစ်လျှောက်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ Renew သက်တမ်းတိုး
သည်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်ပြောင်းသည်ဖြစ်စေ ကတ်ပြားရသောအခါ ယခင်ကကဲ့သို့ သွားယူစရာ (collect လုပ်ရန်) လည်းမလိုတော့ဘဲ
Pass တွင်တင်ပြထားသည့်လိပ်စာသို့ Delivery (ပို့ပေးမည်) ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ Delivery Service သည် MOM ၏ ၀န်ဆောင်မှုသစ်ဖြစ်ပြီး
Work Pass Card Registration (စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်ခွင့်
ကတ်လျှောက်ထားခြင်း) ကို ရုံးသစ်၏ Hall C တွင် ပြုလုပ်ရသည်။
Work Pass Card Registration ဆိုသည်မှာ
MOM မှ Principle Approval Letter (Pass ချပေးကြောင်း
Approve letter) နှင့် မိမိ ဘွဲ့လက်မှတ်၊ ဆေးအောင်လက်မှတ်၊ စသည့်လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို သွားရောက်တင်ပြ
ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ လက်ဗွေမှတ်သားခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ရသည်။
ထို့ကြောင့် MOM ရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ရန်လိုသည်။
Renew (သက်တမ်းတိုး) လုပ်လျှင် မလိုတော့ပါ။ သို့သော် အသစ်စ
လျှောက်သည်ဖြစ်စေ၊ သက်တမ်းတိုးသည်ဖြစ်စေ အလုပ်ပြောင်းသည်
ဖြစ်စေ ကတ်ပြားရသည့်အခါတွင်တော့ သွားထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ Delivery Service ကြောင့် သွားထုတ်စရာလည်း မလိုတော့ပါ။
Delivery Service သည် အသစ်စလျှောက်ခြင်းဆိုလျှင် လိုအပ်သော
Work Pass Card Registration လုပ်ပြီး ၄ ရက်မြောက် (စနေ၊ တနင်္ဂနွေ
နှင့် ပိတ်ရက်များ မပါ) တွင်အရောက် Delivery ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။
Renew (သက်တမ်းတိုး) ဆိုလျှင် အွန်လိုင်းမှသက်တမ်းတိုးပြီး အချက်အလက်
အတည်ပြုစစ်ဆေးအောင်မြင်ပြီးသည်မှ ၄ ရက်မြောက် (စနေ၊ တနင်္ဂနွေ
အလုပ်ပြောင်းဆိုလျှင်လည်း အွန်လိုင်းမှသက်တမ်းတိုးပြီး အချက်အလက်
ဆိုလိုသည်မှာ စင်ကာပူတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် အလုပ်စလုပ်သောသူ၊
MOM တွင် record မရှိသေး၊ register မလုပ်ရသေးသောသူများသာလျှင်
အသစ်စလျှောက်ခြင်းဖြစ်စေ၊ Renew ဖြစ်စေ၊ အလုပ်ပြောင်းဖြစ်စေ
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း ယခင်ကကဲ့သို့ HardCopy
(စာရွက်လိုက်) တင်ပြရန်မလိုတော့ပါ။ Online မှ attach တွဲပေးပို့လိုက်ရုံ
ဖြစ်သည်။ WPOL/EPOL တို့မှတဆင့် အွန်လိုင်းမှ ပေးပို့ရုံသာ။
MOM ရုံးအသစ်တွင် Hall A, B, C ဟူ၍ ရှိပြီး
Hall A တွင်
- Registration with Appointments Only
- Consulation Services
Hall B တွင်
- Special Pass Services
- Transit Management Services
Hall C တွင်
- Work Pass Card Registration
တနလာင်္၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာနေ့ နံနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီ။
အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေးနေ့ နံနက် ၈ နာရီမှ ည ၇ နာရီခွဲ။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက် ပိတ်သည်။
(ယခင်လို စနေ မနက်ပိုင်း နေ့တစ်ဝက်မဖွင့်တော့ပါ။)
1500 Bendemeer Road, Singapore 339946. တွင်
အနီးဆုံး MRT Station မရှိပါ။ Potong Pasir MRT Station (NE10), Exit B မှထွက်ပြီး ဘတ်စ်ကား ၂ မှတ်တိုင်စီးပါ။ (သို့မဟုတ်)
Toa Payoh MRT Station (NS19) မှ ဘတ်စ်ကားစီးပါ။
Bus No 13, 23, 26, 31, 61, 64, 65, 66, 107, 107M, 125, 133,
147, 853, 857, 985, NR6 ဘတ်စ်များရောက်ပြီး MOM Svcs Ctr,
Bus stop Code: 60179 တွင်ဆင်းပါ။ Ministry of Manpower
SPASS လစာကိုလည်း အနိမ့်ဆုံးလစာကို ယခင်က စင်ကာပူဒေါ်လာ
၂၀၀၀ မှ ယခု ၂၂၀၀သို့ တိုးမြှင့်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
(ထို့ကြောင့် ယခုမှအလုပ်လာရှာသူများ စစ၀င်ဝင်ခြင်း လစာ ၂၂၀၀
ရမည်ဟု ထင်မြင်ခြင်းသည် လုံးဝမမှန်ပါ။ အ၀င်ပြပြီး ပြန်အမ်းခိုင်းသော
ကုမ္ပဏီများရှိပါသည်။ သက်တမ်းတိုးမည်သူများလဲ လစာတိုးတော့မည်ဟု
ထင်မြင်ခြင်းထက် ပိုမိုတင်းကြပ်လိုက်သည်ဟုသာ ထင်မြင်ကြပါရန်။)
ကုမ္ပဏီက SPASS အလုပ်သမားအတွက် MOM သို့ ပေးသွင်းရသော
levy ကြေးများကိုလည်း တိုးမြှင့်လိုက်သည်ဟု သိရသည်။
MOM သို့ SPASS လျှောက်ထားခြင်းအတွက် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၆၀ နှင့်
ကတ်အတွက် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၈၀၊ ဟုပြောင်းလဲလိုက်ပါသည်။
SPASS ဖြင့်လုပ်ကိုင်သူများ မိမိတို့ မိသားစုဝင်များ (ဇနီး/သားသမီး စသည်)
ကို Dependent (မှီခိုသူ) အဖြစ် ခေါ်ယူလိုပါက ယခင်က အနိမ့်ဆုံး လစာ
စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၅၀၀ ကျော်လျှင်ခေါ်ယူနိုင်သော်လည်း ယခု လစာ ၄၀၀၀
SPASS Quota ဟုခေါ်သော ခွဲတမ်းတွင်လည်း Service (၀န်ဆောင်မှု)
လုပ်ငန်းများအတွက် ကုမ္ပဏီ စုစုပေါင်းလုပ်သား၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊
အခြားလုပ်ငန်းများအတွက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ SPASS ဖြင့်
Service (၀န်ဆောင်မှု) လုပ်ငန်းများအတွက်
စင်ကာပူနိုင်ငံသား ၆ ယောက်လျှင် နိုင်ငံခြားအလုပ်သမား ၁ ယောက်သာ
စင်ကာပူနိုင်ငံသား ၅ ယောက်လျှင် နိုင်ငံခြားအလုပ်သမား ၁ ယောက်သာ
(ယခုအခါ SPASS စလျှောက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ သက်တမ်းတိုးလျှင်ဖြစ်စေ
ယခင်ကကဲ့သို့ ၁ရက်၊ ၂ရက်အတွင်း Approve သို့မဟုတ် Not
Successful ဆိုသည်ကိုမသိရဘဲ ပိုမိုအချိန်ကြာမြင့်သည်ဟု
(၂၀၀၆ မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တ၀ိုက်တွင် စင်ကာပူတွင် အလယ်အလတ်
တန်းစားအလုပ်သမားများလိုအပ်ချက်အရ SPASS များကို အလွန် လျော့ပေ့ါစဉ်းစားပေးခဲ့ကာ ချထားပေးခဲ့ပါသည်။ ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ကျောင်းမပြီးသေးသူများကိုပါ လျော့ပေ့ါ စဉ်းစားပေးခဲ့သည်ကို ကြုံတွေ့ကြားသိခဲ့ရသည်။
ယခင်က Quota မှာလည်း စင်ကာပူ ၄ယောက်လျှင် နိုင်ငံခြား
သား ၁ ယောက်ခန့်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဘဏ္ဍာရေးအကြပ်အတည်းရိုက်ခတ်မှုနှင့်အတူ စင်ကာပူပြည်သူများ၏ ၀ိုင်းဝန်းကန့်ကွက်တောင်းဆိုမှုကြောင့် တဖြည်းဖြည်းတင်းကြပ်လာရာ ယခုအကြိမ်တွင်လည်း မူဝါဒများပြောင်းလဲကာ ပိုမိုတင်းကြပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သညမည်သို့ဆိုစေ၊ မိမိသည် လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက ရရှိမည်သာဖြစ်သည်။ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုပါ။)
Credit to https://www.facebook.com/HplusMPage
badinf, Chit.tat.lun.tu, cozawone, daylight, exotic, JanJan, jsn_woo, KoSai11, linthuya, meJit, mgmgthan, MNO.BN, nomoregirl, Oscar Htun, pieces, richtt, shadow69, silence, solidsnake, SuperPooh, talkyboy, ThunderHawk, tiptop, zzz
09-09-2013 05:48 AM #984
udkaqmvpfvm;rodbl; ajymwJh insinc.sgrSm MRT eJ h register vkyfxm;wm 1$ awmh&NyD
aemuf 1$ u pending jzpfaewkef;yJ... MumNyDqdkawmh arhawmifaeNyD Spin Game uvJ wpfcgrSraygufbl;/ naeusrS VAM rSm claim oGm;vkyfOD;r,f 1$
badinf, blooddiamond6, daylight, KM Wai, shadow69, solidsnake, THIHA, ThunderHawk, tiptop
09-09-2013 06:51 AM #985
currently at singapore
Thanked 665 Times in 82 Posts
Yes , Thanks you bro Solid as I also got3bucks on last week. It really works especially if takes MRT after peak hours.
blooddiamond6, MNO.BN, shadow69, solidsnake, tiptop, ZuKa
09-10-2013 01:57 AM #986
tJ'gajymwm om; r[kwfbl; xifw,faemh... pOf;pm;vdkU r&bl;... [D;...
Originally Posted by sanaythar
09-10-2013 02:16 AM #987
udkaqmvpfydkpfheJ ha&S hqifhaemufqifhqdkawmh trSwfrSm;oGm;wm
MNO.BN, sanaythar, solidsnake, tiptop, yankanar
09-11-2013 04:36 AM #988
oH&Hk;tcGeftwGuf aemufqHk;&wJh owif;av;yg/ 2010 rwfvtxd aqmifxm;jyD; IRAS tax awG aqmif;xm;wm jy&if 2011 'DZifbmxd raqmif&awmhygbl;vdkY qdkxm;ygw,f/ bavmh*guawmh tcdkiftrmajymxm;ygw,f/ [kwfr[kwfqdkwmawmh oH&Hk;udk oGm;aqmif&if od&rf,xifwmyJ/ ckvwfwavm oGm;aqmifwJholawG &DS&if 'Dowif;av; rSefrrSef twnfjyKay;ygOD;/
tJvdk tcGefudk 2011 'DZifbmxd aqmifp&mrvdkawmhayr,fh udwfp wckckaMumifh oHH&Hk;udk xyfvm&if tJ'D 2011 'DZifbmxd usoifhwm xyfay;&w,fvnf; wcsdK Y comments awGrSm a&;xm;wmawGYw,f/
raqmif&ao;wJholawG 'Dowif;twdkif;rSef&if tawmfoufomrSmrvdkY vmwifay;oGm;w,f.
ကျွန်မ သိထားတာက ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်က ၁၉ ရက်က စလို့ ဆောင်ရမယ့် ဝင်ငွေခွန်ကို ၂% အထိ လျော့ချလိုက်တာ၊ နောက်တော့ ၂၀၁၁ခု ဒီဇင်ဘာအထိပဲ ဆောင်စရာလိုတော့တာ။ အခုတော့ Agreement ထဲက အတိုင်း ၂၀၁၀ မတ်လအထိ မြန်မာဝင်ငွေခွန်ဆောင်ပြီးရင်၊ IRAS မှာ နှစ်တိုင်း filing လုပ်ပြီး စင်္ကာပူအစိုးရကို ဝင်ငွေခွန်ဆောင်ထားတဲ့ အထောက်အထား စုံစုံလင်လင်ပြနိုင်ရင် ၂၀၁၀ ဧပြီလရဲ့ အခွန်ကစလို့ ဆောင်စရာမလိုတော့ပါတဲ့။ ကျွန်မရဲ့ မယုံနိုင်မှုကြောင့် အစ်မက သူကိုယ်တိုင်ဆောင်ထားတဲ့ အထောက်အထား စာရွက်အပြည့်အစုံ ထုတ်ပြပါတယ်။
badinf, blooddiamond6, Incubuz, silence, yankanar, yegyi025, ZuKa
09-11-2013 06:42 AM #989
uGsefawmfh orD;av;twGuf ywfpfydkY oufwrf;wkd;rvkdY... tGefvkdif;uae &ufcsdef;,lwm oufwrf;wkd;zkd;twGuf rygbl;jzpfaew,f... tcGefaqmifeJY tcGefaqmif pmtkyftopfvJ yJygw,f... tJh'g vkyfzl;olrsm; &Sd&if b,fvkdvkyfw,fqkdwm ajymjyygOD;...
KM Wai, yankanar
09-12-2013 12:31 AM #990
raeYu &Hk;u vkyfazmfukdifzuf nDrwpfa,muf oH&Hk;ukd tcGefoGm;aqmif oufwrf;wkd;zkdY oGm;wm ratmifjrifyJ &efjzpf jyefvmowJY/
badinf, Incubuz, KM Wai, mgknow, pinkladylay, Ravan, zoey, ZuKa